पैसा नहुने ऋणीका लागि किस्ता तिर्नु अनिवार्य छैनः नयाँ नेपाल लघुवित्त बर्दिबासका शाखा प्रमुख – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१२ कार्तिक २०७७, बुधबार १७:०१ English
महोत्तरी, १४ जेठ । रामेछाप जिल्लामा जन्मिएका सूर्य प्रसाद आचार्य हाल नया नेपाल लघुबित्त शाखा कार्यालय बर्दिबासका शाखा प्रमुखका रुपमा कार्यरत छन् । पछिल्लो समय देशको अर्थ ब्यबस्था डामाडोल छ । यस्तो बिषम् परिस्थितिमा देशका लघु बित्तहरुको अबस्था चाहि के छ त ? शाखा प्रमुख आचार्यसँग nepal24hours.com का लागि निरोज कुमार थापाले लिएको अन्तरवार्ताको संपादित अंश हामीले प्रस्तुत गरेका छौः
तपाई एउटा वित्तिय संस्थाको जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ, अहिलेको यो बिषम् परिबेशमा आफ्ना सदस्यहरुलाई के सेवा दिईरहनु भएको छ ?
हेर्नुस्, हामी केन्द्रको निर्णयलाई कुरिरहेको हुन्छौ । केन्द्रले आधिकारिक रुपमा हामी शाखालाई गरेको परिपत्र नै अन्तिम हुन्छ । पछिल्लो समय हामीले हाम्रा ऋणी सदस्यहरुलाई बैशाख १५ देखी लागु हुने गरी चलिरहेको ब्याजदरमा ३ प्रतिशत छुटको ब्यबस्था गरेका छौ ।
यसको अलवा अहिलेको संक्रमणको अबस्थामा किस्ताको लागि अनिवार्य गरेका छैनौ । आबश्यक अनुसार किस्ता तिर्न इच्छुक सदस्यको लागि हामीले सेवा दिईरहेका छौ ।
तपाईहरुलाई एउटा आरोप छ नि, गाउँका सोझा सिधा जनतालाई त्यसमाथि पनि बिशेष गरी महिला वर्गलाई फकाउने ऋण दिने, पछि उक्त ऋण असुली गर्न धम्कि दिने गर्नु हुन्छ भन्ने ?
सही प्रश्न गर्नु भो, हो यो आरोप हामीलाई लागेको छ । तर सबैले के कुरा मनन गर्नु पर्यो भने हामी लघु बित्तको कारण ग्रामिण क्षेत्रमा धेरै लघु उद्यमहरु चलेको छन्। गाउँका जो किसानी वर्गहरु छन् जसका आयका श्रोतहरु कम् छन्, आज उनीहरुलाई हामीले सक्षम बनाएका छौ । हामीलाई मात्रै आरोप लगाउनु भन्दा पनि सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा लघुबित्तले पछिल्लो समयमा ग्रामिण क्षेत्रका विपन्न वर्गलाई कति सहयोग पुर्याएको छ भनेर बुझ्नु आबश्यक पनि छ ।
आज अधिकांश बिपन्न परिवारहरु हाम्रो सानो सहयोगले सम्पन्न भएका छन् । हामीलाई आरोप लगाउनेहरुले यो कुरा पनि त अध्ययन गर्नु पर्यो नि हैन र ?
अहिले कोरोनाको संक्रमणको अवस्था छ, तपाईहरु सेवा दिई रहेका छौ भन्नुहुन्छ यसको मतलब आफ्ना ऋणी सदस्यहरुलाई अप्रत्यक्ष रुपमा पेलिरहनु भा छ हैन त ?
तपाईले कसरी बुझ्नु भो मेरो भनाईलाई त्यो तपाईको कुरा हो । हमीलाई पनि कोरोनाको डर छ । हामी पनि कुनै भगवानको अवतार हैनौ ता कि रोगको प्रोकोप हुदा हामीलाई बचाओस् । मैले भन्न खोजेको यो हो कि, यदि कोही ऋणीसंग पैसा छ ऊ आफ्नो किस्ता घटाउन चाहन्छ भने हामी सुरक्षित साथ उसलाई सेवा दिन्छौ । र अर्को कुरा ययाँ ऋणको मात्रै कुरा छैन बचत राख्ने र बचत फिर्ता गर्न आउनेको पनि सवाल हुन्छ उनिहरुको पनि आफ्नो अधिकार हुन्छ त्यो कुरा हामीले मनन गर्नु पर्छ नै ।
सरकारले लघुबित्त सम्बन्धी जारी गरेका नयाँ निर्देशिका आफ्ना सदस्य माझ पनि पुर्याउनु पर्छ नै हामीले । तपाईले पनि बुझ्न सक्नु हुन्छ हाम्रो शाखाबाट यो प्रतिकुल समयमा कसैलाई पनि जबरजस्ति गरेका छैनौ र गर्दैनौ पनि ।
तपाईहरुले राज्यलाई कर तिरेर संस्था चलाउनु हुन्छ, यस्तो बिषम परिस्थितिमा राज्यले पनि केही सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दैन ?
अहिले यो संक्रमणले राज्य आफै अप्ठ्यारो अबस्थामा छ । हामीले पनि राज्यलाई आम्दानीको हिसाबले कर तिर्ने हो त्यसैले राज्य प्रति त्यति धेरै ठूलो अपेक्षा गरेका पनि छैनौ । यसो भनिरहदा राज्यबाट हामी केही आशा गर्दैनौ भन्ने पनि हैन । राष्ट्र बैङ्कले हामीलाई पनि संस्था सञ्चालन निर्देशिका जारी गरेको हुन्छ । हिजाको दिनमा जति सहज परिवेश थियो अहिले त्यति सहज छैन तसर्थ संस्था सञ्चालनको लागि अब सरकारले पनि अलि लचकता अपनाउनु पर्छ । अन्यथा केही स्थापित संस्थाहरु नै बन्द हुने अबस्थामा पुग्न सक्छन। यो कुरालाई राज्यले बिशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
अहिले त ऋण लगानी पनि नहोला, तपाईहरुको संस्थाको आम्दानी त ब्याज र वचतबाटै हुने त हो नि हैनर ? यस्तो अप्ठ्यारो अबस्थामा कसरी संस्था चलाउनु हुन्छ ?
हाम्रो संस्था सेवामूलक उदेश्य राखेर स्थापित संस्था हो । यसको मतलब नाफा चाहिन्न भनेको पनि हैन सेवासंगै नाफा हो ।
अहिलेको अबस्थामा हाम्रो संस्थाले नाफाको आशा पनि राखेको छैन । सेवा भने अहिले पनि दिई नै रहेका छौ । यो समयको नियति हाम्रो संस्थाले मात्र हैन देशका सबै अन्य संस्थाहरुले भोगिरहेका छन् । यस्तो समयको परिकल्पना कोही कसैले पनि गरेका थिएनन् । फेरि हामी जस्ता पूर्ण रुपमा स्थापित संस्थाहरुले एउटा बिपत्ति आउने बित्तिकै बिचलित पनि हुनु हुदैन । अहिले सबै मिलेर यो प्रतिकुल समयको सामना गर्नुपर्छ । आगामि दिनको समय अत्यन्त अनुकुल हुनेछ आशा गरौ ।
अन्यमा एउटा प्रश्न गरौ, तपाईहरुको संस्थाले ऋण लगानी गर्दा समूह चाहिने, एक ब्यक्तिलाई दिन नहुने अनि त्यो पनि महिलाकै समूह हुनुपर्ने, पुरुष हुनु नहुने प्रवधान छ, यो त लैङ्गिक बिभेद भएन र ?
कुरा के हो भने हाम्रो संस्थाले बिशेषगरी बिपन्न परिवारलाई थोरै लगानी गरेर सिङ्गो समाजलाई नै समुन्नत बनाउने उदेश्य राखेको छ । त्यसको लागि हामीले समूह बनाएर ऋण लगानी गरेका हौ ।
अर्को कुरा हामी चाहान्छौ हामीले लगानी गरेको ऋण सही ठाउमा सदुपयोग होस् । तपाईले पनि देख्नु भएकै होला बैङ्कहरुले पनि लगानी गर्दा धितो खोज्छन् । हाम्रो धितो भनेकै समुह हो हामी समूहको विश्वासमा टिकेका हुन्छौ । हामीले लैङ्गिक बिभेद गर्दिनौ श्रीमतीलाई ऋण लगानी गर्दा श्रीमान साक्षी बस्नै पर्छ यसो हुदा, महिला पुरूष दुबैको उपस्थिति देखिन्छ । त्यस माथि पनि महिलाहरु घरायासी काममा मात्रै ब्यस्त हुने हुदा उनीहरुलाई पनि ब्यबसायमा उत्प्रेरणा मिलोस् भनेर हामीले महिलाहरुको समूह बनाएका हौ ।
१४ जेष्ठ २०७७, बुधबार २०:२९ मा प्रकाशित